Howsha Guddiga Farsamo ee Rooble u magacaabay maamulka Doorashada oo la shaaciyey (4 Qodob) | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya ayaa shaacisay shaqada ay qaban doonaan Guddiga Farsamada ee maamulka Doorashada dadban ee uu shalay magacaabay Ra’iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Qoraal uu soo saaray xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay inuu magacaabay koox farsamo oo qaabilsan hagidda iyo isu duwidda qorshaha Ra’iisul Wasaaraha ee doorasho xilligeeda ku dhacda, xor iyo xalaal ah, kuna saleysan heshiiskii 27-kii May.
Guddiga ayaa xiriirin doona Golaha Wadatashiga Qaran iyo Beesha Caalamka, ayna taageero farsamo siin doonaan Guddiyada madaxa bannaan ee doorashooyinka. Waxayna Guddiga farsamada ay kulankoodii ugu horeeyay maanta.
Shaqada uu Guddigan ka taageeri doono Ra’iisal wasaaraha ayaa kala ah:
1- In qodobadii heshiiska shirkii Golaha wadatashiga Qaranka 27 ka May 2021 loo fuliyo si habsami ah.
2 – Xiriirinta dhamaan hayadaha ku shaqada leh arrimaha doorashooyinka si loo hagaajiyo habsami u xiriirka hay’adaha wada shaqeynaayo
4. Xiriirinta Xafiirka Ra’iisal wasaaraha, Golaha wadatashiga qaranka iyo bessha caalamka.
Kooxdan Ra’isul Wasaaruhu magacaabay waxaa lagu sheegau inay shaqadoodu ku kooban tahay inay farsamo ahaan gacansiiyaan Guddiyada Doorashada.
Previous articleMidowga Musharixiinta oo soo dhoweyn Sharuud ku xiran kasoo saaray kala saarista Guddiyada Doorashada
Next articleXasan Sheekh oo si kulul uga hadlay Askarta ku maqan Dalka Eritrea. “Daawo Baaq ku socda Farmajo iyo..”